HRW: Rabshado ayaa Weli ka Socda Ethiopia
DIbadbaxyada Oromada (Sawir hore)
Illaa 200 oo qof ayaa la dilay tan iyo markii ay rabshadaha billowdeen bishii November ee sanadkii hore, sida ay sheegtay hay'adda.
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dibadbaxyada gobolka Oromada Ethiopia ay weli socdaan, inkasta oo dowladda ay hakisay qorshe lagu balaarinayey caasimadda Addis-Ababa.
Taas ayaa dhalisay, ayay tiri hay’addu, in in dowladdu ay sii waddo qab-qasbasho rabshado ay la socdaan oo ka dhan ah dadka Oromada.
Warbixinta hay’adda ayaa faah-faahisay qoraallo kasoo baxay mucaaradka oo sheegaya in 200 oo qof la dilay tan iyo markii ay rabshadaha billowdeen bishii November ee sanadkii hore, islamarkaana kumanaan qof oo kale la xiray.
Human Rights waxa ay ku warrameysaa in ciidamada ammaanka ay geysanayaan dambiyo ay ku jiraan inay rasaas oodda kaga qaadaan dad dibadbaxaya, islamrkaana ay jir dilaan kuwa la xiro.
Dowladdu Ethiopia waxa ay qirtay inay dibadbaxyo dhaceen bishii February, hase yeeshee aysan wax xiriir ah la lahayn dibadbaxyadii ka dhashay qorshe la doonayey in caasimadda Addis-Ababa loogu ballaariyo dhulka Oromada.
Dowladda Somalia oo Sharraxaad Weydiisatay Kenya
Ciidamada Amisom oo Waddada Loo Galay
Hay'ado ka Digay Xaaladda Caafimaad ee Somalia
Halgamaa Caaqil Cumar Feen oo Geeriyooday